မန်တလေး အမရပူရမွို့နယျကပွညျသူတှေ ဘယျပါတီနဲ့ ဘယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျကို ဘယျလိုရှေးပွီး မဲပေးမလဲ – Voice of Myanmar
၂၀၂၀ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ရှေးကောကျပှဲအတှကျ Voice Of Myanmar (VOM) က အခြိနျယူပွီး မဲဆန်ဒရှငျတခြို့ကို ရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ အသိတှေ ပွညျသူတှဘေယျလောကျသိထားသလဲ လို့ စဈတမျးသဘောမြိုးမေးကွညျ့တဲ့အခါ မဲပေးဖို့သာ စိတျအားထကျသနျကွပွီး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့ရကျ၊ မိမိပေးရမယျ့ ပါတီရဲ့ကိုယျစားလှယျလောငျးကို မသိကွသူအမြားစုဖွဈနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့ ဒီကနေ့ မန်တလေးခရိုငျ အမရပူရမွို့နယျက မဲဆန်ဒရှငျတှအေတှကျ သိသငျ့တဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး အမရပူရမွို့နယျမှာနထေိုငျတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျတှအေနနေဲ့ ရှမျးတိုငျးသားမဟုတျတဲ့ အခွားတိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ အမြိုးသားလှတျတျောအတှကျ တဈမဲ၊ ပွညျသူ့လှတျတျောအတှကျ တဈမဲ၊ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောအတှကျ တဈမဲ စုစုပေါငျး မဲကဒျပွား ၃ခု ထုတျယူပွီး မိမိကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ပါတီနဲ့ကိုယျစားလှယျလောငျးရဲ့ ဘေးမှာ မဲရုံကထုတျပေးတဲ့ တံဆိပျတုံးကို နှိပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ရှမျးတိုငျးရငျးသားတှအေတှကျကတော့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးနရောအတှကျပါပေးရမှာမို့ မဲပေးရမယျ့လကျမှတျကဒျပွား တဈခု ထပျထညျ့ရမှာမို့ ၄ မဲပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ မဲလကျမှတျတှကေို ထုတျယူတဲ့အခါ စုတျပွဲတာ ရစေိုတာ မှငျစှနျးတာ စတာတှကေိုသခြောစဈဆေးပွီး မကွိုကျရငျ ခကျြခငျြးလဲလှယျခိုငျးလို့ရပါတယျ။ အမရပူရမွို့နယျက မဲပေးမယျ့သူတှေ ဘယျပါတီက ကိုယျစားလှယျလောငျးကို ရှေးကွမလဲ ဆကျဖတျကွညျ့ပါ။
အမရပူရမွို့နယျက အမြိုးသားလှတျတျောနရောအတှကျ ဘယျသူတှပွေိုငျမလဲ
အမရပူရမွို့နယျဟာ အမြိုးသားလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၅)ဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောအတှကျ ယှဉျပွိုငျမယျ့ပါတီ ၆ခုရှိပါတယျ။ ဘယျပါတီတှလေဲဆိုတော့ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)၊ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD)၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ(UBP)၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP)၊ အမြိုးသားနိုငျငံရေးဒီမိုကရကျတဈပါတီ(DNP) စတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၆ ခုမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမှာပါ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှဈသကျရာ ပါတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးဘေးမှာ အမှနျခွဈတံဆိပျတုံးလေး အကှကျထဲမှာ သခြောရိုကျနှိပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး အမရပူရမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောမဲဆန်ဒနယျမှာ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ(မွနျမာ)(DPM)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD)၊ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP)၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ(UBP)၊ ဦးမွငျ့ရညျ(ခ)ဦးဇျောခိုငျ(တသီးပုဂ်ဂလ)၊ ဒေါကျတာသနျးထိုကျဦး(တသီးပုဂ်ဂလ) စတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၆ ခုနဲ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျးနှဈဦး ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမှာပါ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှဈသကျရာ ပါတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးဘေးမှာ အမှနျခွဈတံဆိပျတုံးလေး အကှကျထဲမှာ သခြောရိုကျနှိပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
အမရပူရ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၁ မှာ ဘယျပါတီတှပွေိုငျမလဲ ?
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး အမရပူရမွို့နယျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၁) မှာ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ(UBP)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD)၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)၊ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP)၊ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ(NUP) စတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၆ ခုက ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမှာပါ ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှဈသကျရာ ပါတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးဘေးမှာ အမှနျခွဈတံဆိပျတုံးလေး အကှကျထဲမှာ သခြောရိုကျနှိပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
အမရပူရမွို့နယျ အမှတျ ၂ မှာ ဘယျပါတီတှပွေိုငျမလဲ ?
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး အမရပူရမွို့နယျ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂) မှာ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ(UBP)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ(NLD)၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ(UDP)၊ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ(PPP)၊ ဦးဝငျးမွငျ့(တသီးပုဂ်ဂလ) စတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၅ ခုနဲ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျးတဦး ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမှာပါ ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှဈသကျရာ ပါတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးဘေးမှာ အမှနျခွဈတံဆိပျတုံးလေး အကှကျထဲမှာ သခြောရိုကျနှိပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
မန္တလေး အမရပူရမြို့နယ်ကပြည်သူတွေ ဘယ်ပါတီနဲ့ ဘယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဘယ်လိုရွေးပြီး မဲပေးမလဲ
၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Voice Of Myanmar (VOM) က အချိန်ယူပြီး မဲဆန္ဒရှင်တချို့ကို ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိတွေ ပြည်သူတွေဘယ်လောက်သိထားသလဲ လို့ စစ်တမ်းသဘောမျိုးမေးကြည့်တဲ့အခါ မဲပေးဖို့သာ စိတ်အားထက်သန်ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်၊ မိမိပေးရမယ့် ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မသိကြသူအများစုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီကနေ့ မန္တလေးခရိုင် အမရပူရမြို့နယ်က မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် သိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ ရှမ်းတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် တစ်မဲ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် တစ်မဲ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက် တစ်မဲ စုစုပေါင်း မဲကဒ်ပြား ၃ခု ထုတ်ယူပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ဘေးမှာ မဲရုံကထုတ်ပေးတဲ့ တံဆိပ်တုံးကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက်ပါပေးရမှာမို့ မဲပေးရမယ့်လက်မှတ်ကဒ်ပြား တစ်ခု ထပ်ထည့်ရမှာမို့ ၄ မဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဲလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ယူတဲ့အခါ စုတ်ပြဲတာ ရေစိုတာ မှင်စွန်းတာ စတာတွေကိုသေချာစစ်ဆေးပြီး မကြိုက်ရင် ချက်ချင်းလဲလှယ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အမရပူရမြို့နယ်က မဲပေးမယ့်သူတွေ ဘယ်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ရွေးကြမလဲ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
အမရပူရမြို့နယ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာအတွက် ဘယ်သူတွေပြိုင်မလဲ
အမရပူရမြို့နယ်ဟာ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၅)ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ပါတီ ၆ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်ပါတီတွေလဲဆိုတော့
ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ(UBP)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DNP) စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၆ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တံဆိပ်တုံးလေး အကွက်ထဲမှာ သေချာရိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)(DPM)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP)၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ(UBP)၊ ဦးမြင့်ရည်(ခ)ဦးဇော်ခိုင်(တသီးပုဂ္ဂလ)၊ ဒေါက်တာသန်းထိုက်ဦး(တသီးပုဂ္ဂလ) စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၆ ခုနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တံဆိပ်တုံးလေး အကွက်ထဲမှာ သေချာရိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမရပူရ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ မှာ ဘယ်ပါတီတွေပြိုင်မလဲ ?
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ(UBP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP)၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(NUP) စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၆ ခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တံဆိပ်တုံးလေး အကွက်ထဲမှာ သေချာရိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမရပူရမြို့နယ် အမှတ် ၂ မှာ ဘယ်ပါတီတွေပြိုင်မလဲ ?
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ(UBP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(NLD)၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP)၊ ဦးဝင်းမြင့်(တသီးပုဂ္ဂလ) စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ ။ ဒီထဲက မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တံဆိပ်တုံးလေး အကွက်ထဲမှာ သေချာရိုက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။